Ukukhula kokugenca kokumaketha kokuqukethwe | Martech Zone
Esinye sezizathu esenza i-ejensi yethu ingesona isitolo sokuqukethwe kungenxa yokuthi inhloso yokumaketha okuku-inthanethi akuyona ukukhiqiza okuqukethwe, ukukhulisa ibhizinisi lakho. Sikhiqiza okuqukethwe (ikakhulukazi i-infographics namaphepha amhlophe) yamakhasimende, kepha ukuchofoza ukushicilela kuyisinyathelo esisodwa kucebo elikhulu kakhulu. Ukuqonda ukuthi ubhalela bani nokuthi hlobo luni lokuqukethwe abakufunayo kufanele kwenzeke ngaphambi kwesikhathi. Futhi uma usushicilele okuqukethwe, lapho-ke kuzodingeka uqiniseke ukuthi kuhlanganisiwe futhi kuthuthukiswa kahle ukukhulisa ukufinyelela kwakho.
Kuyini ukugenca kokukhula?
Kunomgoqo ophansi wokungena wokwenza umkhiqizo wewebhu… kepha ukukhipha igama kungabiza kakhulu. Ukuqala kwesigaba sokuqala ngaphandle kwemali yokukhangisa noma yokwazisa ngemikhiqizo yabo kungaqhamuka namasu wokumaketha angajwayelekile ukuthola amakhasimende amasha ngobuningi. Lokhu kwaziwa njenge ukuqhuma ukukhula futhi ifake i-SEO, Ukuhlolwa kwe-A / B kanye Nokumaketha Okuqukethwe.
Uma ufuna ukuthi ibhulogi yakho ikhule, ungahle uthande ukufunda into noma ezimbili kusuka ku-hacker wokuqukethwe. Ukhathazeke kakhulu ngezimoto futhi akagxile kokunye ngaphandle kokukhula. Le infographic izokunikeza ukubuka ngaphakathi kwengqondo yabo yangaphakathi futhi ikusize ukuthi ube yi-hacker yakho yokuqukethwe.
Le infographic evela kubantu e CoSchedule, ikhalenda elihle kakhulu lokuhlela imithombo yezokuxhumana yeWordPress enezici eziningi. QAPHELA: I-infographics isu elihle lokugenca ukukhula!
Tags: Ukukhangisa Okuqukethwecoscheduleukuqhuma ukukhula
Ithuluzi elifanele le-Influencer noma i-Journalist Outreach